samedi, 15 juillet 2017 19:51
Ankatso: Namoaka mpianatra 600
Nanodidina ny 600 teo ireo mpianatra nivoaka teo amin'ny ENS na ny École Normale Supérieure izay notanterahina teny amin'ny Cathedrale Médecine Ankatso ny alakamisy 13 jolay lasa teo.
samedi, 15 juillet 2017 19:19
Mandritsara: Nolavin'ny fanjakana ny kongresim-paritra saika hataon'ny TIM
Tokony hotanterahiny ny alakamisy 20 jolay izao aty Mandritsara ny kongresin'ny antoko Tiako i Madagasikara, faritra Sofia. Nanome fahazoan-dalana ny Distrika, efa azo ny toerana hanaovana azy, efa voafandrika ny fiaramanidina hitondra ny mpikamban'ny birao foiben'ny antoko tarihin'i Marc Ravalomanana.
Nilatsaka indray anefa ny baiko avy eny Mahazoarivo mandrara ny hanatanterahana an'io kongresy io.
samedi, 15 juillet 2017 12:10
Tolagnaro: Zaza hita tao anaty fanariam-pako
Tokony tamin'ny 07 ora maraina androany asabotsy 15 jolay, raha haka fako ireo mpiasan'ny Kaominina dia indreo zaza no hita nariana tao. Avy hatrany dia nentina teto amin'ny Chef fokontany eto Esokaka Tolagnaro.
Tonga dia raikitra ny tsipaipiakan'izay nandalo ary nomena sakafo ilay zaza. Ny Ray amandreniny kosa dia eo ampitadiavana azy ny manampahefana satria dia voasazy mafy ny manary zanaka.
samedi, 15 juillet 2017 11:28
Sambava: Iza no tena afaka CEPE, Emilien Bakisy sa Emelin Flaurent ?
Rehefa nivoaka ny voka-panadinana CEPE farany teo tato amin'ny fari-piadidiam-pampianarana Sambava dia afaka ny laharana 19301102-D08/04 ary anaran'i Emilien Bakisy no nisoratra tamin'io laharana io.
Nanizingizina anefa ny Ray aman-drenin'i Emelin Flaurent fa an-janany io laharana io.
Nanazava ny lehiben'ny fari-panentanana pedagôjika na Chef ZAP Farahalana fa efa tsikaritr'izy ireo nialohan'ny fanadinana fa diso fanoratra ny anarana.
Nampahafantarina izany ny tompon'andraikitra teto Sambava saingy nilaza ireto farany fa tsy possible intsony ny hanovana ny anarana voasoratra any amin'ny convocation fa fafao fotsiny dia soloy ny anarana, dia izao mitranga izao ny olana.
Sambava: Mitaky 1.400.000Ar ilay nandray an-tanana ilay zaza narian-dreniny vao haveriny amin'ny fianakaviany
Omaly zoma vao nipoitra tao Antaimby ny fianakavian'ilay zaza nisy nanary tao an-tsenan'Ambodisatrana ny 07 jolay 2017 lasa iny. Izany antsoina hoe: Nasia, 28 taona, avy any Nosiarina izany no reny niteraka io zaza io, ary zanany faharoa ity nariany ity, araka ny fanazavan-dRatoa Be Zaraline.
Tonga niaraka tamin'ilay reny nanary zanaka ny fianakaviany omaly mba haka ilay zaza, nilaza anefa Ratoa Razafindrasoa Lalao Marie fa mila honerana ny fotoana nikarakarany io zaza io ka vola 1.400.000 Ariary no takiana, izay vao homeny ny fianakaviana ilay zaza.
Tsy vita teny anivon'ny Fokontany ny raharaha ka niditra nampihavana ny Solombavam-bahoaka Mamangy Norbert fa tsy nahitana marimaritra iraisana.
Tsy napoitra ho hitan'ny havany ilay zaza nandritra izany fifandresen-dahatra izany.
samedi, 15 juillet 2017 10:24
Mahajanga : 2.500 ireo teratany frantsay miasa sy monina
Nisy ny lanonana nanamarihana ny fetim-pirenena Frantsay tao amin'ny Alliance Française Mahajanga. Lanonana natrehin'ireo olom-panjakana, teratany frantsay ary ireo mizaka ny zom-pirenena Frantsay taty an-toerana.
Mahatratra 2.500 ireo teratany frantsay miasa sy monina eto Mahajanga ankehitriny, raha 20.000 izany manerana ny nosy. Azo lazaina ho maro araka izany izy ireo eto Mahajanga raha miohatra amin'ireo any amin'ny faritra hafa.
samedi, 15 juillet 2017 09:38
RN4-RN6 : Ho tapaka ny lalana ny alatsinainy 17 jolay 2017
Ho tokanan'ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny alatsinainy izao ny tetezana Kamoro eo amin'ny RN4 PK406+300.
Koa dia tapaka tanteraka amin'ny fivezivezena ny lalana manomboka amin'ny 09 ora30 ka hatramin'ny 01 ora atoandro.
Voakasik'izany fahatapahana izany avokoa ny lalana
- avy any Antananarivo ho any Andranomamy RN4 PK 402
- avy any Mahajanga ho any Tsaramandroso RN4 PK 424
- avy any Antsiranana ho any Manerinerina RN6 PK 27
Tsy voalaza na misy fahazoan-dalana manokana na tsia ireo fiara mitondra marary.
samedi, 15 juillet 2017 09:28
RN4-RN6 : Routes coupées le lundi 17 juillet 2017
Celles-ci à cause de l'inauguration par le président de la République du nouveau pont Kamoro sur la RN4 PK406+300.
Ainsi, la route sera coupée entre 9h30 et 13h :
- venant d'Antananarivo à Andranomamy RN4 PK 402
- venant de Mahajanga à Tsaramandroso RN4 PK 424
- venant d'Antsiranana à Manerinerina RN6 PK 27
Les usagers de la route nationale sont prévenus ! Aucune disposition particulière n'a été communiquée en cas d'urgence comme l'évacuation sanitaire.